Yakachipa Organic Fetiraiza Kuzvifambisa wega Wheel Type Composting Turner Machine Vatengi uye Fekitori | YiZheng
Wheel Type Composting Turner Muchina otomatiki composting uye yekuvirisa michina ine hurefu hwakareba uye nekudzika kwezvipfuyo mupfudze, sludge uye marara, filtration matope, yakaderera slag keke uye mashanga husaga mune shuga zvigayo, uye zvakare inoshandiswa zvakanyanya mukuvirisa uye kupera mvura mu organic fetiraiza zvirimwa, remubatanidzwa fetiraiza zvirimwa , mafekitori emarara uye emarara, mapurazi egadheni uye zvinomera zvebismuth.
Chii chinonzi Wheel Type Composting Turner Machine?
Wheel Type Composting Turner Muchina chakakosha chinovira michina muhombe muhombe organic fetiraiza inogadzira chirimwa. Iyo mavhiri manyowa Turner inogona kutenderera kumberi, kumashure uye zvakasununguka, zvese izvo zvinoitwa nemunhu mumwe. Mavhiri emagetsi evhinga anoshanda pamusoro pematepi komputa akaiswa pamberi; mapanga anotenderera akaiswa pamadhiramu akasimba anotenderera pasi petarakita zvishandiso zvekusanganisa, kusunungura kana kufambisa matura.
Kushandiswa kwe Wheel Type Composting Turner Machine
Wheel Type Composting Turner Muchina anoshandiswa zvakanyanya mukuvirisa uye kubvisa mvura mashandiro senge organic manyowa zvirimwa, mukomboni manyowa mafotereza, sludge nemarara mafekitori, gadheni mapurazi uye howa zvirimwa.
1. Inokodzera aerobic Fermentation, inogona kushandiswa pamwe chete nemagetsi ezuva ekuvirisa, matangi ekuvirisa uye mashifita.
2. Zvigadzirwa zvakawanikwa kubva kumusoro-tembiricha eerobic Fermentation inogona kushandiswa kugadzirisa ivhu, kurima gadheni, chifukidziro chevhu, nezvimwe.
1. Wheel Type Composting Turner Muchina inogona kuenda kumberi, kumashure uye kutendeuka zvakasununguka uye zvese izvi zvinofambiswa zvinoshandiswa nemunhu mumwe chete.
2. Iyo bio-organic zvigadzirwa zvinofanirwa kuunganidzwa kutanga pasi kana mumashopu mune strip chimiro.
3. Compost Turner inoshanda nekukwira pamusoro pecompost yakaunganidzwa pamberi; Mapanga anotenderera akaiswa pane yakasimba dhiramu rinotenderera pasi petarakita ndidzo zvishandiso chaizvo zvekusanganisa, kusunungura kana kufambisa manyowa akaunganidzwa.
4. Mushure mekutendeuka, murwi mutsva we compost unoumbwa uye womirira kuti uenderere mberi nekuvira.
5. Kune thermometer yetompost yekuyera tembiricha yemanyowa kuitira kuti kechipiri kutendeuka.
Zvakanakira Wheel Type Composting Turner Machine
1. Iyo yakakwira kutendeuka kudzika: iyo yakadzika inogona kuva 1.5-3m;
2. Huru kutendeuka nguva: hupamhi hukuru hunogona kuve 30m;
3. Iko kushomeka kwesimba kwesimba: kutora yakasarudzika simba inobudirira kufambisa mashandiro, uye simba rekushandisa yeiyo imwechete vhoriyamu yekushandisa iri 70% yakaderera pane iya yechinyakare kutendeuka michina;
4. Kutendeuka pasina kona yakafa: kumhanya kwekumhanya kuri mukuyanana, uye pasi pekushandurwa kwetiraki yekuchinja trolley, hapana kona yakafa;
5. High degree of automation: yakagadzirirwa nemagetsi akazara emagetsi ekugadzirisa, kana mutengesi achishanda pasina kudiwa kweanoshanda.
Wheel Type Composting Turner Machine Vhidhiyo Ratidziro
Wheel Type Composting Turner Machine Model kusarudzwa
Simba guru (kw)
Nhare yemagetsi magetsi (kw)
Simba risina simba (kw)
Tendeuka upamhi (m)
Tendeuka udzamu (m)
Pashure: Horizontal Fermentation Tangi
Zvadaro: Double Screw Komposting Turner